Zava-manan-danja tokony ho fantatra momba ny fanarahan-dàlana CCNP - ITS
Fandraisana andraikitra amin'ny IT
Famerenana indray ny ezaka atao amin'ny CCNP
CCNP Fanamafisana ny fiaraha-miasa:Ny filàn'ny manampahaizana manokana sy ny fampitomboana ireo matihanina miady amin'ny karazam-panatontosana mitovy, dia namoaka sticks sy endrikendrika vaovao. Izany no fototra ijoroan'ny indostrian'ny IT izay tena mahavariana ny toe-javatra, noho ny fampivelarana tsy tapaka ny raharaham-barotra. Ny iray dia tsy maintsy mandanjalanja rehefa misafidy ny manetsika ny fahaiza-manaony ary ny fanapahan-kevitra momba ny fanamarinana sy ny fianarana dia tokony hiorina amin'izany tahaka izao.
Ny fanamarinana sarobidy indrindra amin'ny orinasa IT dia ny Cisco Certifications ary manana rafitra marika izy ireo ho fanamafisana olona iray. Ny pyramida noraisin'izy ireo dia manana ambaratonga miaraka amin'ny ambaratonga fototra ao amin'ny fotony, mandalo amin'ny ambaran'ny Associate, eo amin'io sehatra Professional io, manaraka ny farany ny Level Expert amin'ny farany ambony dia ny haavon'ny Architect. Ankoatry ny sehatry ny sehatra dia manana mari-pahaizana sivy ny dingana tsirairay ary ny fahatakarana dia tokony hianatra sy hanazava ny isam-pianarana tsirairay. Ireo mari-pankasitrahana ao anatin'ny fifandimbiasan-dry zareo dia-
Mitety sy mampifanaraka
Ny lanjan'ny piramida tsirairay dia manana ny anjarany mba hilalao ary mitarika fanavaozana hafa mba hahazoana ny fepetra takian'ny asa momba ny asa samihafa. Ny avo indrindra dia miditra amin'ny haavony izay manosika anao hampiakatra ny sehatra sy ny fiarandalamby heno ny fahaizanao mampiasa ny tambajotra. Ny 'Professional Level' dia manaraka fanamarinana -
CCNP mikarakara sy manova
Mpanome tolotra CCNP
CCNP Collaboration - Dingana avo lenta
CCNP Collaboration dia programa fanamafisana ny asa fanamafisana ny asa ary ny fampiofanana dia atao, mahatsiaro, manatsara ny fahaiza-manaonao sy ny fahafahana mampita ny 'Business esteems'. Ho an'ny tetik'asa ara-barotra IT rehetra amin'ny fandrosoana dia zava-dehibe sy ilaina CCNP Collaboration Miaro anao amin'ny alalan'ity fahafaha-manao ity mba hanamafisana ny fahaiza-manaon'ny ezaka iombonana ataonao.
Azonao atao ity fanamarinana ity aorian'ny fanombohana ny fanamarinana CCNA momba ny fiaraha-miasa na ny CCIE mari-pankasitrahana. Ireo miaraka aminy dia ny fampiofanana voafantina tokony ho tsapanao
Manatanteraka ny Cisco IP Telephony sy Video, Fizarana 1
Manatanteraka ny Cisco IP Telephony sy Video, Fizarana 2
Fanadihadiana ny Cisco IP Telephony sy Video
Fanatanterahana ireo fampiharana fiaraha-miasa Cisco
Ireo miaraka aminy dia ny fanadinana tokony hazava-
Ireto manaraka ireto ny hevi-dehiben'ny fanadinana:
Fanadihadihana - Duration - Number of Questions
300-070 CIPTV1 - 75 minitra - 55-65
300-075 CIPTV2 - 75 minitra - 50-60
300-080 CTCOLLAB - 75 minitra - 55-65
300-085 CAPPS - 75 minitra - 55-65
Ny olona izay 18years na ambony dia mahafeno ny fepetra.
Ny fifantohana amin'ny test dia manamafy ny rakitra miaraka amin'ny sary an-tsary sy ny marika avo lenta, toy izany ihany koa, ny ID roa mpaka sary. (Raha tsy misy marika fampitaovana).
Ireo olona monina any amin'ny firenena tahaka an'i Kuba, Iran, Siria, Korea Avaratra ary i Sodana dia voafetra amin'io fanadihadiana io.
Ny isa dia voatazona ao amin'ny tranonkala ary dia raisina ho fandoavam-bola kely handalinana na fizarana.
Fananana fanantenana azo antoka mba hipetraka mafy mandritra ny dimy andro fandaharam-potoana hamerenana ny fanadinana.
Rehefa vita ilay famerenana dia navoaka ny tatitra an-tsoratra voasoritra miaraka amin'ny sary natokana ho an'ny fanantenana.
Azonao atao ny manara-maso ny fandrosoana, ny tarehimarika sy ny toerana mahaliana ny fanamarinana miaraka amin'ny Cisco Certifications Tracking System.
Ny mari-pankasitrahana dia ara-dalàna mandritra ny fotoana lava ary azo averina amin'ny alàlan'ny fandoavana ny iray amin'ireto manaraka ireto mialohan'ny daty fisian'ny fanadinana:
Ny fanadinana 642-XXX / 300-XXX amin'izao fotoana izao,
Ny fanadihadiana CCIE amin'izao fotoana izao,
Ny CCDE amin'izao fotoana dia mifototra / midina amin'ny tany Examining,
Ny tena zava-dehibe indrindra dia ny mikatsaka ny fanamarinana sy ny fampiofanana avy amin'ny Cisco Learning Partner voarakitra tahaka izao - "NY"Izay manolotra ny kou Cisco farany indrindra, mamelombelona sy mendrika indrindra ho an'ireo matihanina amin'ny tambajotra.
Jereo ihany koa : Fanamarinana CCNA - Guide tanteraka